Ogaden News Agency (ONA) – Xuska 8 March Iyo Dareenka Dumarka Reer Ogadeniya.
Xuska 8 March Iyo Dareenka Dumarka Reer Ogadeniya.
Posted by Dulmane	/ March 9, 2016
Sanadkata maanta oo kale waxaa dunida laga Xusaa maalinta haweenka aduunka, 8 March waa maalinta loo asteeyay in ay dumarka aduunku xusaan waxayna dumarka aduunku Kusoo bandhigaan dareenkooda ku aadan dhinaca hormarka ay dumarku gaadheen iyagoo sidoo kale xusa dib u dhaca dumarka dunida kuyimaada. Dumarka kunool wadamada xorta ah ama dumarka wadan koodu uu yahay mid madax banaan waxay maanta 8 March Kusoo dhaweeyeen farxad iyo rayn rayn waxayna ku faraxsan yihiin in ay jirto maalin dumarka ugaar ah oo ay arimahooda kaga hadlaan.
Hadaba waxaa dareen kaas ka duwan qaba dumarka S.ogadenia oo ah dumar ku nool Marxalad aad u adag waxayna dareenkooda u muujiyeen qaab kaduwan sida dumarka kale ay dareenkooda usoo gudbiyeen.
Dumarka ree Ogadenia waxay wakhti xaadirkan u qayb sanyihiin qayb xabsiyada kabuuxa, qayb jidh-dil ba’an ay ugaysanayaan ciidamada gumaysiga Ethiopia, qayb ladilay saygoodii oo ciyaal agoon ah noloshooda la hardamaysa, qayb kufsi loogaystay oo mustaqbal koodii lagu riday ceel dheer, qayb ubadkoodii lalaayay iyo qayb qoxooti ku ah wadan aysan daryeel ku haysanin.
Wakaalada Wararka Ogadenia ONA qaybteeda Bariga Africa oo la hadashay in badan oo kamid ah haweenka ree ogadenia ee qoxootiga ku ah wadanka Kenya ayaa soo uruurisay dareenka dumarka ree Ogadenia waxayna si isku mid ah u sheegeen in aysan wax farxad ah Kusoo dhawaynaynin maalinta haweenka aduunka, oo maanta ku beegnayd.
hooyo kusugan xeryaha Dhadhaab oo ONA la hadashay ayaa tidhi ” kuma soo dhawaynayo farxad maalinta la sheegayo ee haweenka waayo anagu waxaaba nahay dumar xabsiyada iyo qoxootiyada uqaybsan Waana maalin uu qubanayo dhiiga dumarka ree Ogadenia marka waxaan kujiraa sanado badan oo murugo ah” ayay tidhi iyadoo murugo badan ay kamuuqatay.
Sidoo kale gabadh kamid ah gabdhaha ogadenia lagu soo Dhibaateeyay oo hadlaysay ayaa tidhi dumarka maanta faraxsan isku aduunba majoogno anaga dumarkaanaga iyo ragaanagaba waxaan xusnaa maalinta xasuuqa ogadenia ee majirto maalin farxad noo ah oo aan xusno” ayay tidhi waxayna hadal keeda Kusoo gabagabaysay waxaan dunida kacodsanayaa in ay il gooni ah ku fiiriyaan dumarka Ogadenia ku dhibaataysan ee jeelasha kabuuxa.
Sikastaba ha ahaatee dumarka ree ogadenia oo ah dumar uu allaah ku manaystay adkaysi ayaa ladaalaa dhacaya dhibaatooyin kasoo gaadhay gumaysiga wadanka ogadenia ku habsaday mana helaan goobo wax Barasho ama goobo caafimaad oo ay ku umulaan waxaana usii dheer xabsi aan dhamaad lahayn.